Hay Day အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
1.51.91 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（150.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Hay Day
Hay Day ကိုကြိုဆိုပါ၏။ လယ်ယာတစ်ခု, ငါးကိုတည်ဆောက်, တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူ။ ချိုင့်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရဒိသု၏ကိုယ်ပိုင်အချပ်ကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသည်ဘယ်တော့မှပိုမိုလွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ် ပို. ပျော်စရာကောင်းသည်မဟုတ်! ဂျုံနှင့်ပြောင်းကဲ့သို့သောကောက်ပဲသီးနှံများသည်စိုက်ပျိုးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးမိုးမရွာသော်လည်းဘယ်တော့မျှမသေနိုင်ပါ။ ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်တူညီသောမျိုးစေ့များသည်သင်၏သီးနှံများကိုမြှောက်ရန်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကြက်များ, ဝက်များနှင့်နွားများကဲ့သို့သောကြက်များကိုသင်တိုးချဲ့။ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကြိုဆိုကြသည်။ သင်၏တိရိစ္ဆာန်များကိုကြက်ဥများ, ဘေကွန်, နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရန်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးပြားများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားအမိန့်များကိုဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ရန်။
အပြည့်အဝလွစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ Bakery, BBQ ကင်ဆာသို့မဟုတ်သကြားစက်ဝိုင်းကဲ့သို့သောလယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆောက်အအုံများသည်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုရောင်းချရန်သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့လိမ့်မည်။ အရသာရှိသောကိတ်မုန့်ဖုတ်ရန်ချစ်စရာကောင်းသောအဝတ်အစားသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်မီးဖိုကိုဖန်တီးရန်အပ်ချုပ်စက်နှင့်ရက်ကန်းကိုတည်ဆောက်ပါ။ သင်၏အိပ်မက်လယ်ယာတွင်အခွင့်အလမ်းများအဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်၏လယ်ယာမြေများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများဖြင့်အလှဆင်သည်။ သင်၏လယ်ယာအိမ်, ကျီ, ထရပ်ကားနှင့်လမ်းဘေးဆိုင်များကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်အတူမြှင့်တင်ရန်။ သင်၏ခြံကို Panda ရုပ်ထု, မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကဲ့သို့ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလှဆင်ခြင်း, စောင်း, တီရှပ်များ, အထူးပစ္စည်းများနှင့်အတူအလှဆင်ခြင်း - လိပ်ပြာများကိုဆွဲဆောင်ရန်ပန်းများကဲ့သို့ - သင်၏လယ်ယာကိုပိုမိုလှပစေရန်။ သင်၏စတိုင်ကိုပြသသောလယ်ယာတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိတ်အားတက်ကြွစေသည့်လယ်ယာတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဤလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး Simulator တွင်ဒီလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး Simulator မှ Truck သို့မဟုတ် Steamboat မှရောင်းသည်။ ကုန်သွယ်ရေးသီးနှံများ, လတ်ဆတ်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုရန်အရင်းအမြစ်များ။ အတွေ့အကြုံနှင့်ဒင်္ဂါးများရရှိရန်ကုန်ပစ္စည်းများလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုလဲလှယ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းဘေးဆိုင်ကိုသော့ဖွင့်ရန်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သီးနှံများကိုရောင်းချနိုင်သောနေရာကိုသင်ရောင်းချနိုင်သည်။
သင်၏လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးချဲ့ပြီးချိုင့်ဝှမ်းရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားပါ။ အိမ်နီးချင်းတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကို ဖန်တီး. ကစားသမား 30 အထိအုပ်စုတစ်စုနှင့်ကစားပါ။ သိကောင်းစရာများဖလှယ်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အံ့သြဖွယ်ခြံများဖန်တီးရန်ကူညီပါ။
ယနေ့ download လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုတည်ဆောက်ပါ။ လယ်ယာ။ အစဉ်အဆက်!
Hay Shay features:
လယ်ယာမြေတည်ဆောက်ခြင်း, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသည်လွယ်ကူသည်, မြေကွက်များ, ရိတ်သိမ်းခြင်း, ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစိုက်ပျိုးခြင်း, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရဒိသု၏ကိုယ်ပိုင်အချပ်
စပါးရိတ်ခြင်း, BR> မျိုးစေ့များကိုရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့သောဂျုံကဲ့သို့သောကောက်ပဲသီးနှံများကိုသုံးပါ။ တိရိစ္ဆာန်များကိုသင်၏လယ်ယာတွင်ထည့်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီ။
ကြက်, မြင်းများ, သင်၏လယ်ယာနှင့်အတူသွားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီ
သို့သွားရန်နေရာများနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို ဆက်.0င်ရောက်နိုင်သည်။ ရေကိုငါးဖမ်းရန်သင်၏ဆွဲဆောင်ရန် - မြို့ - မြို့တော်ကို ပြင်. Town ည့်သည်များအမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်မြို့ကိုသွားပါ။ Valley: Valley: Valley - သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားပါ အိမ်နီးချင်းများ -
- ကုန်သွယ်ရေး အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်လတ်ဆတ်သောကုန်ပစ္စည်းများ - သူငယ်ချင်းများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပါ။ သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူအပတ်စဉ်ဒါဘီပွဲများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အနိုင်ရရှိပါ။
- ကုန်သွယ်ရေး, လတ်ဆတ်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားနှင့်အတူသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့များဖြင့်ပင်။ !
အိမ်နီးချင်း, မင်းမှာပြ problems နာတွေရှိလား။ https://supercell.helpshift.com/a/hay-day/?l=EN သို့ဝင်ရောက်ပါ။ Settings> Help နှင့် Support သို့သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအောက်တွင် အသက် 13 နှစ်နှင့်အထက်တွင်လူများအတွက်သာ download လုပ်ရန်နှင့်ကစားရန်အတွက် Hay Day ကို Download လုပ်. ကစားရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျေးဇူးပြု. မှတ်သားပါ။ Hay Day သည် download ရယူ. တပ်ဆင်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောဂိမ်းပစ္စည်းများကိုအစစ်အမှန်ငွေအတွက်လည်း0ယ်ယူနိုင်သည်။ သင်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးမပြုလိုပါကသင်၏ Google Play Store အက်ပလီကေးရှင်း၏ချိန်ညှိချက်များတွင်0ယ်ယူမှုအတွက်စကားဝှက်ကိုကာကွယ်ပါ။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Hay Day 1.51.91
Expand Your Farm Again | HaY DaY Gameplay
ko nay maka
Hay Day good ကစားလိုမရေသးဘူလာ
Good graphic and animals' activities are very funny! The game make me fun!.